Sheekh Cali Dheere oo ka hadlay Weerarkii cuslaa ee maanta ka dhacay Magaalada Muqdisho (Warbixin) - iftineducation.com
Sheekh Cali Dheere oo ka hadlay Weerarkii cuslaa ee maanta ka dhacay Magaalada Muqdisho (Warbixin)
iftineducation.com – Afhayeenka Alshabaab, Sheekh Cali Maxamuud Raage Sheekh Cali Dheere oo shir Jaraa’id qabtay ayaa waxa uu kaga hadlay shirkiisa weerarkii maanta ka dhacay Magaalada Muqdisho, ayaa waxa uu sheegay in Weerarkaasi ay iyaga ka dambeeyen.
Waxa uu sheegay isaga oo la hadlaayay Warbaahinta afka alshabaab ku hadasha in weerarkaasi bartilmaameedkiisu ahaa Ciidamada dowlada federaalka ee sida gaarka ah u tababaran loona yaqaan Alpha Group.
Cali Dheere ayaa waxa uu yiri ”Waxaan hawlgal ku qaadnay Saraakiil, ay ku jiraan khuburo cadaan ah gudaha Magaalada Muqdisho.”
Sidoo kale, Al Shabaab waxay sheegtay in weerarka oo ay u adeegsatay walxaha qarxa ay ku dhishay 8 askari oo mid kamida uu ahaa sarkaal sare oo qaabilsan la dagaalanka Argagaxisada, sida ay ku baahiyeen barta ay interneedka ku leeyihiin.
Weerarkaan wuxuu ku soo aadayaa, xilli Ururka Al Shabaab ay maalinimadii shalay ku hanjabeen in weeraradoodu aynaan hakin doonin duqeymaha ay dalka ka wadaan diyaaradaha Mareykanka.
Tirada dadkii ku dhintay Qaraxii ka dhacay wadada Afisyooni oo la shaaciyay iyo Faahfaahino kasoo baxayo
XOG:- Seefta Siilaanyo oo gasha ka baxsan & WASIIRO wadnaha farta ku haya